New IMOBA 2022 Apk Dhawunirodha Ye Android [ML Injector] - Luso Gamer
New IMOBA 2022 Apk Dhawunirodha Ye Android [ML Injector]
MOBA mitambo inotambwa uye inodiwa pasi rese. Kunyangwe isu tine chokwadi chekuti vazhinji veMLBB vatambi vemutambo vari kutsvaga nzira yechokwadi yekubaya majekiseni akasiyana. Saka tichifunga nezvekufarira kwevatambi uye nzira yakachengeteka yejekiseni pano takaunza New IMBA 2022.
Muchokwadi, izvi zvakanyanya Injector yakarongeka yakatarisa Mobile Legend Bang Bang gamers. Chinangwa chekugadzirisa app ndechekupa nzira yakachengeteka. Iko kurambidzwa uye mamwe matambudziko ekuona anobviswa zvachose.
Kunyangwe pazasi pano isu tichatsanangura ese akakosha matanho anosanganisira maitiro ekuisa uye mashandisiro ekushandisa. Zvakadaro isu tichatsanangurawo mamwe akakosha matipi ekudzivirira kurambidza dambudziko. Kana iwe uchida kunakidzwa kune pro maficha echishandiso wobva warodha Nyowani IMOBA Chikamu 54.
Chii chinonzi Nyowani IMOBA 2022 Apk
New IMOBA 2022 ndeye online bato rechitatu rutsigiro MLBB chishandiso chakagadzirwa nevasingazivikanwe vanogadzira. Isu tinoziva nezvevagadziri uye vanhu vari shure kwekuwanikwa kukuru uku. Zvakadaro hazvizokodzeri kuburitsa zita rake pasina mvumo.
Kana tikatarisa mune zvakadzama kusanganisira zvakakosha zvinonetsa zvinoratidzwa nevatambi. Takawana akawanda akasiyana akakosha matambudziko angangosangana nevatambi vachiri kushandisa. Dambudziko rekutanga uye rakakosha rekushandisa zvishandiso zvakadaro zvechitatu kurambidzwa zvachose.
Chikonzero chekutora rubatsiro kubva kune chechitatu masosi imhaka yekukwikwidza kwakasimba. Zvakare, iyo yakawanda yezviwanikwa zvepro zvinosanganisira Skins uye Mhedzisiro inoiswa muchikamu cheprimiyamu. Zvinoreva kuti pasina kuisa mari chaiyo, hazvibviri kuwana zvinhu izvozvo.
Mutengo chaiwo wekuwana zvinhu izvozvo unogona kudarika mazana emadhora. Kunyangwe vatambi vanopenga nezveaya eKisimusi Skins uye Migumisiro. Saka iwe uri kutsvaga yepamhepo yechitatu bato inotsigirwa Android sosi. Ipapo isu tinokurudzira avo kuisa Nyowani IMOBA Chikamu 54 Android.
zita Nyowani IMOBA 2022
zera 10.7 MB
Package Zita com.mlbb.imoba
Kana tikatarisa mune akakosha ruzivo kusanganisira zviwanikwa zvinosvikika kubaya. Iwo mapro features anosanganisira All Skins, Drone View, All Effects and More Menu etc. Tinokanganwa kutaura nezveiyi huru Anti-Ban process inosvikika.
Isu takambotaura nezvakawanda zvevatambi vanoratidza kunetseka kukuru pamusoro pekurambidza dambudziko. Iyo gameplay server kuchengetedza mapuroteni anogadziridzwa nguva nenguva. Izvi zvinoreva kana maseva akabudirira pakuona zviri kunze kwemutemo.
Zvadaro izvo zvinopihwa sarudzo izere yekunyora pasi account yekutamba pamwe nemudziyo pakati pemidziyo isina kunyorwa. Kana chigadzirwa chakarambidzwa kamwe chete, saka hazvibviri kugadzirisa maitiro. Iye zvino kugonesa Anti-Ban uye Anti Cheat kuchabvisa zvese zvipingaidzo.
Inonyanya kufadza yekuwedzera ndeyeKisimusi Skins. Avo ndiClaude, Eudora, Freya, Karina, Lancelot, Fanny, Gord, Zilong, Odette, Miya uye Updated Hero Karrie etc. Yeuka zvinhu zvose zvataurwa zvinosvikika kupinza.
Kuti uite izvozvo, vatambi vanokumbirwa kurodha yazvino vhezheni yeNew IMOBA Chikamu 54 ML kubva pano. Zvino isa iyo chaiyo app mukati me android smartphone. Uye jekiseni zvakachengeteka risingaperi premium Skins uye Mhedzisiro kusanganisira Kisimusi muunganidzwa mahara.
Iyo app turusi ndeyemahara kurodha.
Kuisa chishandiso kunopa kuunganidzwa kusingagumi kwezvinhu zvepro.
Izvi zvinosanganisira Skins, Mhedzisiro, Drone View uye More Menu.
Ant-Ban uye Anti-Cheat zvakare inosvikika.
Hapana kushambadzira kwakananga kunobvumidzwa.
Secure channel inopihwa jekiseni.
Iyo yekushandisa interface yakachengetwa iri nyore.
Maitiro Ekurodha Nyowani IMBA 2022 Apk
Kana zvasvika pakurodha yazvino vhezheni yeApk mafaera. Vashandisi veandroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu, nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa mafaera echokwadi. Kuita chokwadi chekuti vashandisi vanovaraidzwa nechigadzirwa chakakodzera.
Takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge timu ine chokwadi nezve kushanda zvakanaka kweApk faira. Isu hatimbope iyo Apk mukati yekurodha chikamu chevatambi veandroid. Kudhawunirodha yazvino vhezheni yeIMOBA Injector ndapota tinya pazasi apa link.
Kunyangwe isu tisina chokwadi nezve maitiro asi kutora rubatsiro rwechitatu bato maturusi mukati megameplay hazvisi pamutemo. Kunyange kusvika ikozvino mamiriyoni emaakaundi emitambo akarambidzwa. Zvakadaro ivo vanogadzira vanodyara akasiyana matanho ekuchengetedza, vachiri kuisa uye kupinza majekiseni epro panjodzi yako wega.
Kusvika parizvino akawanda mamwe eML Injecting Tools anoburitswa pano pane yedu webhusaiti. Kuti utarise iwo maturusi anoenderana ndapota tevera zvinongedzo. Zviri MEOW IMLS Apk uye Papskie Injector Apk.
Iwe uri fan hombe yeMobile Legend Bang Bang, asi usingakwanise kufambira mberi nekuda kwekushomeka zviwanikwa uye kushomeka kwehunyanzvi. Ipapo usazvinetse nekuti pano taunza iyi mhinduro huru. Ikozvino kuisa Nyowani IMBA 2022 Dhawunirodha inobatsira jekiseni yemahara premium Skins uye Mhedzisiro mukati memutambo.
Categories Tools, Apps Tags Nyowani IMOBA 2022, Nyowani IMOBA 2022 Apk, New IMBA 2022 Dhawunirodha, New IMOBA Chikamu 54 ML Post navigation
Zviri pamutemo Kudhawunirodha Bulli Bai Apk? [Sulli Deals]
Komban Bus Skin Dhawunirodha Ye Android [BUSSID Livery]